Shirkii gudida badbaada Degaanka Soomaalida oo maanta Addis Ababa lagusoo gaba gabeeyey iyo war murtiyeed iyo baaq kasoo baxay. Hoos ka akhri. War Murtiyeed – Xeernews24
Shirkii gudida badbaada Degaanka Soomaalida oo maanta Addis Ababa lagusoo gaba gabeeyey iyo war murtiyeed iyo baaq kasoo baxay. Hoos ka akhri. War Murtiyeed
11. Juli 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Xaalada Guud ee Deegaanka
1. Waxaa dhamaan bur bur iyo halis galay haykal kii iyo sharaftii dawladnimmo.
2. Waxaa lagu xad gudbay lana jabiyey dastuurkii iyo sharuucdii wadanka iyo deegaankaba. Waxaa luntay sarayntii sharciga iyo xuquudii aas aasiga e muwaadiniinta ku nool degaanka Somalida dastuurku siiyey. Waxaa lagu tuntay xuquuqihii aas aasiga ahaa ee dastuurka ku sugnaa.
3. Laamihii dawlada sida fulinta, sharci dajinta iyo gaarsoorku waxay noqdeen mid hal meel isug timaada, Hanaankii dawladu wuxuu isu badalay nidaam kali talis, oo lid ku ah shacabka iyo danihii loo id maday.
4. Xukumada iyo deegaanka waxaa ku baahay musuq bilaa xuduud ah, ku tagri fal awoodeed, taasi oo khayraadkii iyo hantidii dawlada sidii iyo habkii la doono loo isticmaalio.
5. Waxaa meesha ka baxay in si sinaan iyo cadaalada beelaha deegaanku horumarka iyo khayraadka deegaanka uga faa iidaystaan, iyo hanaankii qaybsiga matalaada deegaanka.
1. Waxaan can baaray naynaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada sida joogtada ah loogu gaysanayo shacab waynaha deegaanka Soomaalida, sida dilka foosha xun, xidhayga sharci darada ah, kufsiga,dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada ay masuulka ka tahay xukumadii iyaga matali lahayd
2. Waxaan can baaraynaynaa fahan la aanta siyaasadeed ee xukumada hada deeganka ka arimisa ay ka qabto siyaasada cafiska iyo is jaclaanshaha ku dhisan. Hada oo guud ahaan Itoobiya boogihi lawada dhayayo xukumada deegaankuna si dibu dhac ay ayey dhibaatooyin cusub u maleegayso
3. Waxaan can baaray naynaa isku dhacyada iyo dagaalada ujeedo la aanta ah, ee uu ka danbeeyo qaabdhismeedka dawlada, ee sababay daadashada dhiiga shacabka. Sida dagaalada labada shacab ee walaalaha ah ee Oromada iyo Soomaalida, iyo sidoo kale Qabaailka Somaaliyeed ee.
4. Waxaan can baaraynaynaa isku day kasta oo lid ku ah kana soo horjeeda is badalada siyaasadeed iyo kuwa dhaqan dhaqaale ee xukumada Dr: Abiye Ahmed wado. Ee ay wadaan ururada ama shaqsiyaadka aan jeclayn sinaanta iyo wada noolaanshaha shacab waynaha Itoobiya.
5. Waxaan can baaray naynaa isku daygii gii fulay nimada ahaa ee lagu beeg saday shacab waynihii taageerada u muujiyey is badalka uu wado Dr: Abdi. Tacsina u diraynaa eheladii iyo dadkii wax yeeladu ka soo gaadhay.
6. Waxaan can baaray naynaa in dawlada federaalka laama heeda kala duwan ay gudan waayeen waajibaadkii, ka saaraa inay bad baadiyaan xuquuqda muwaadiniinta deeganka, ilaa lin waayeen dastuurka. Taasi oon leenahay dawlada federaalku way ku fashilan tahay waajibaad kii saarana kama soo bixin.
Taageero iyo Balan qaad
1. Anaga oo ah Golaha Bad baada Somaalida, oo ka kooban odayaal dhaqameedkii, siyaasiyiintii, Bar baartii, aqoon yahankii ,dulmid diidkii gudaha iyo dibadaba waxaan balan qaadaynaa in aan horumarka iyo nabad galyada deegaanka ilaalino, is badalka deegaanka ka dhacaana horseedi doono nabad galyo taama Iyo in aan khilaafaadka dadka walaaha ee Oromada iyo Somaalida iyo qoomadiaya kaleba ku xalin doono dhaqan kii soo jireenka ahaa ee wada noolaansha.
2. Waxaan si wayn u taageeraynaa guud ahaan is badalka siyaasadeed ee ka socda dalka ee uu hormoodka u yahay Dr: Abiye Ahmed, oo aan hiil iyo hoob la garab taaganaya. Waxaan taageeraynaa talaabooyinka caafimaadka qaba ee uu sadex dii bilood ee uu joogay qaaday Raisal wasaaruhu.
3. Waxaan taageeraynaa nabadayntya dibada iyo gudaha qoomiyadaha dalka ee uu Raisal wasaaruhu ku talaab saday. Iyo wada noolaansha shacab waynaha Itoobiya
1. Waxaan ugu baaqaynaa xukumada iyo xisbiga deegaanka ka taliyaa inay is casilaan, maadaama oo ay ka leexdeen hadafkii iyo ujeedadii loo idmaday
2. Anagoo u mahad celinayna shacab waynaha itoobiya taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaalida, ayaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka Itoobiyaa inay taageeraan isbadalka uu shacabka Soomaalidu u ooman yahay, iyo dadaalkan bilowga ah ee uu Golaha Bad baada Soomaalidu wadno hada.
3. Waxaan ugu baaqaynaa dhamaan shacab waynaha deegaanka Soomaalida inay u midoobaan baadi goobka xuquud dooda dastuuriga ah. Kana dheeraadaan wax kasta oo keenaya isku dhac gudahooda ah iyo wada noolaansha walaalahooda kale ee Itoobiya.
4. Waxaan hogaanka dalka, hayada garsoorka iyo laamaha amniga ee dalka ugu baaqaynaa inay talaabo cad ka qadaadaan xad gudub yada foosaha xun ee ka dhacay deegaanka, dhaca, dilka, boobka, kufsiga, iyo maarayn xumada hantida shacabka.
5. Waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo joojiyo ka ganacsiga dhiiga dadka walaalaha ah somaalida iyo Oromada, iyo sidoo kale soomaalida iyo canfarta, ee ay fuliynayaan qaab dhismeedka dawliga ah. Waxaan ku baaqaynaa in dawlada federaalku sharciga horkeento cidii hawshaas ku lug lahayd, sababtayna barakaca iyo dhiiga shacabka.
6. Waxaan ugu baaqaynaa in la siidaayo xoriyadoodiina loo soo celiya dhamaan maxaabiista deeganka soomaalida, ee sida cadaaalad darada ah ugu xidhan uguna dhibaataysan jeelasha deegaanka. waxaan sidoo kalena ugu baaqaynaa in Dawlada federaalkuna baadhitaan dheeraada ka gaysato tacadiyada lagula kacay maxaabiista deegaanka, isla markaana xaqiijiso in go aankii cafiska ee dawlada federaalku deegaanka ka fulay.
7. Waxaan ugu baaqaynaa shacab waynaha Soomaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay ka soo qayb galaan shirwaynaha wada tashiga ee Diri dhaba. Waxaan si gaara ugu baaqaynaa Garaadada, Suldaanada, Maqlaaqyada, Wabarada, aqoon yahanka, indheer garadka, Xubnaha Xisbiga, xubnaha Baarlamaanka federaalka Soomaalida, Qurba joogta deegaanka inay ka soo qayb galaan shir waynaha wada tashiga. Sidoo kalena taageeraan Golaha Bad baada.
8. Waxaan ugu baaqaynaa dawlada federaalka, gaar ahaan laamah amnigu taageeraan Golaha Bad baada Soomaalida, si u soo celiyaan taladii deegaanka iyo cadaaladii shacabka
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/22.jpg 720 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-11 21:54:152018-07-11 21:54:15Shirkii gudida badbaada Degaanka Soomaalida oo maanta Addis Ababa lagusoo gaba gabeeyey iyo war murtiyeed iyo baaq kasoo baxay. Hoos ka akhri. War Murtiyeed
Maxaa kajira in Ay kulan fool ka fool ah Yeesheen Cabdi iley iyo Dr Aby Qodabadana... Getachew Assefa ayaa Cabsi galin iyo Hanjabaad joogta ah igu heyn jiray(Hataataqa...